ललितपुर महानगरभित्र तीन ठाउँमा पारदर्शी हरियो बार- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
पुल्चोक क्याम्पसको उद्घाटन
ललितपुर — ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र तीन ठाउँमा जीर्ण र अग्लो पर्खाल भत्काई पारदर्शी हरियो बार लगाएको छ । जसमध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको पश्चिमतर्फ (मूल सडकपट्टि ) लगाइएको वारको बुधबार महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र क्याम्पस प्रमुख प्रा. लक्ष्मण पौडेलले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नगर गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पस हातामा उक्त वार लगाइएको महानगरले जनाएको छ । ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनले क्याम्पस परिसरमा रहेको कलात्मक राणाकालीन पुरानो आनन्द निकेतन दरबार र हरियालीयुक्त बगैंचाको सुन्दरता सबैलाई देखाउन यस्तो बार लगाएको बताए । ‘अग्लो र जीर्ण भवनले सहरको सुन्दरतामा आँच पुगेको थियो,' उनले भने, `भूकम्पको दृष्टिले समेत यी पर्खाल जोखिमपूर्ण थिए ।’पुल्चोक क्याम्पसको यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५५ लाख २ सय १६ रुपैयाँ लागेको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख प्रा. पौडेलले सहरलाई सुन्दर बनाउन अघि सारेको योजनाको प्रशंसा गरे । उनले क्याम्पस परिसरमा रहेको बगैंचालाई अझै व्यवस्थित बनाउने बताए ।
महानगरभित्र अन्य दुई ठाउँ सदर चिडियाखाना अगाडिको फुटबल मैदान वरिपरि करिब एक करोड १२ लाख रूपैयाँ र महालक्ष्मीस्थान नजिकै रहेको राजदल गणसँगैको खेल मैदान वरिपरि करिब ७० लाख रूपैयाँमा र लगाएको महानगर प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १५:४६
मंसिर १०, २०७७ अर्जुन शाह
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ६ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सरकारले कूल विनियोजित बजेटमा २ अर्ब ९ करोड ८६ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको हो । चालू वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ९९ करोड २८ लाख र चालूतर्फ १ अर्ब १० करोड ४७ लाख खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताएका छन् ।
मन्त्री बोहराले यस अवधिको खर्च गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको भन्दा बढि भएको बताए । ‘कोभिडको जटिल परिस्थितीमा पनि हामीले उत्साहजनक खर्च गर्न सकेका छौं’ उनले भने, ‘चालू चौमासिकमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च पुर्‍याउँछौं ।’
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १५:०१